Anatin’ny Tontolon’ny Bilaogy Japoney – Ny Onja Manohitra an’i Korea · Global Voices teny Malagasy
Anatin'ny Tontolon'ny Bilaogy Japoney – Ny Onja Manohitra an'i Korea
Voadika ny 05 Novambra 2018 13:14 GMT
Manao lisitr'ireo bilaogy Japoney be mpijery indrindra anatinà sokajy maro samy hafa ny “Ninki Blog Ranking“, izay tena ilaina tokoa. Misy ireo bilaogy ho an'ireo renim-pianakaviana te hanampy ny zanany hahomby kokoa eo amin'ny fianarana, ireo bilaogy natokana hanaraha-maso ny fihetsik'ireo olo-malaza, ary ireo bilaogy miresaka ny fomba tsara indrindra hitandremana ny sakafo hanina. Ary toy ny vondrompiarahamonina hafa rehetra anaty aterineto, tsy lany ao Japàna ireo bilaogy natokana ho an'ireo manampahaizana manome ny heviny aminà sehatra iray, ny ankamaroan'ny adihevitra izay mifantoka amin'ny fifandraisana miharatsy eo amin'i Japàna sy ireo mpifanila aminy ao Azia, Shina ary ireo Korea roa.
Araka ireo fandaharana ny bilaogy, tsy mieritreritra ny hamerina fihavanana ireo bilaogera Japoney. Ary na eo aza ny lazan'ireo entana Koreana rehetra ao Japana, izay antsoina hoe Kan-ryuu, na Onja Koreana, maro ireo bilaogera mikendry an'i Korea.
Bilaogy fahenina malaza indrindra ao Japana amin'izao fotoana izao ny Safidio Tsara (izay inoanao)! Fahalalàna momba an'i Korea, araka ny Ninki Blog Ranking, ary miseho ho fanafody manala ny “fironan'ny fampahalalam-baovao Japoney amin'ny fanatsaràna an'i Korea.”
Hita anatin'ireo bilaogy hafa miresaka ny pôlitika Ireo Mpifanolo-bodirindrina Mahatsiravina amin'i Japàna (bilaogy Japoney faha-7 malaza indrindra amin'izao), Tsy Mila ny Kan-ryuu Izahay (laharana faha-11), ary ny Marina momba an'i Azia – Ny Tsy Lazain'ny Fampahalalam-baovao Anao Momba an'i Shina sy Korea (mitana ny laharana faha-12).
Amin'ny ankapobeny, asehon'ireo bilaogera Japoney ny sorisoriny sy ny hatezerany manoloana an'i Shina sy i Korea taorian'ireo hetsipanoherana an'i Japana niseho tany amin'ireo firenena ireo tamin'ity lohataona lasa teo ity, eo ihany koa ny fifandonana amin'i Korea noho izay tokony ho tompon'ny nosy ao amin'ny Ranomasin'i Japana (na ny Ranomasina Atsinanana, araka ny fiantsoan'ireo Koreana azy) antsoina hoe Takeshima any Japana ary Tokdo any Korea.
Miresaka mombanà boky iray manokana ireo bilaogera Japoney eo amin'ny lafiny pôlitika – ny Ken-Kan-Ryuu, izay adika tsotra hoe Onja Manohitra ny Koreana. Araka ny voalaza anatin'ny teny fanoloran'ilay mpamoaka boky, voarakitra anatin'io boky io (izay miendrika manga) ny fivoarana ara-tsain'i Nakame Okiayu, mpianatra “tsotra” eny amin'ny lisea izay mahita fa sarotra ny Tantara, saingy “nahatakatakatra manjavozavo ihany fa nanao zavatra ratsy tamin'i Korea i Japàna.” Niova anefa izany rehetra izany rehefa lasa mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo i Nakame ary mahafantatra ireo “zavamarina mahagaga momba an'i Korea sy ny tantarany.”
Rehefa avy “noraràna” nandritra ny roa taona ilay boky dia navoaka ihany ny 24 Jolay 2005. Mandeha be ny varotra, hany ka mampandre ny Amazon ao Japana fa noho ny lazan'ilay boky dia mety haharitra efatra ka hatramin'ny enina herinandro ny fanaterana ny Ken-Kan-Ryuu (roa na telo andro eo ny fanateran'ny Amazon ao Japaconena matetika).
Raha ny momba ny Ken-Kan-Ryuu, tena azo tsaraina amin'ny fonony tokoa ny boky. “Boky iray tena mampidi-doza ity,” hoy ny mivaky eo amin'ny fonony. “Maninona i Korea no nananika ny faritr'i Japana, dia ireo Nosy Takeshima?” hoy ny hiakan'ny teny fanolorana iray hafa. “Tsy ilaina ny mifona amin'i Korea na manamboatra izay rava,” hoy koa ny hiaka hafa.
Nitombo ny lazan'ny famerenana mandinika ny Tantara tao Japana tanatin'ny folo taona lasa. Raha maro tamin'ireo mpiaro an'i Japana tamin'ny vanimpotoan'ny ady no ratsy toetra tsotra izao, tahaka ny governoran'i Tôkyô Shintaro Ishihara, misy kosa ireo mpitsikera mahara-baovao, mahay mandresy lahatra toa an'i Yoshinori Kobayashi, mpanoratra ny manga Sensou-ron, izay mahay mandahateny fa nampijaliana i Japana nandritra ny ady farany teo fa tsy nampijaly, noho ireo daroka baomba atomika tao Hiroshima sy Nagasaki.
Misisika moramora anatin'ny tontolon'ny bilaogy Japoney ihany koa ireo filazàna hafa fa natosik'i Etazonia hiady i Japana, ary raha ny marina dia nanavotra an'i Azia tamin'ireo mpanjanatany Eoropeana i Japana izay nanantena hametraka ny fizakantena sy ny fahaleovantena anatin'ny firenena rehetra, ny fivoarana ara-toekarena, ary ny fandripahana ny fanavakavaham-bolonkoditra.
Maro amin'ireo fihenjanana misy eo amin'i Japana sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy no avy amin'ireo boky nanova ny tantara, nosoratan'ny Japanese Society for Textbook Reform. (Orinasa Japoney ho an'ny Fanavaozana ireo Boky Fampianarana). Hatreto, filankevi-pitantananà sekoly roa no nampiasa ireo boky fampianarana miteraka resabe ireo tamin'ity taona ity, navoaka anaty aterineto amin'ny teny Anglisy, Koreana ary Mandarin ny iray amin'ireo boky fampianarana ireo.
Tokony hiteraka adihevitra maro ho an'ny ambin'ity fahavaratra ity ireo boky fampianarana manafintohina ireo, sy ny resaky ny lafiny enina amin'izay hanjo ny Sarinosy Koreana, izay hiteraka fotodresaka maro hosoratan'ireo manam-pahaizana ara-tantara anatin'ny bilaoginy avy eo.
04 Jolay 2021Azia Atsinanana
02 Jolay 2021Azia Atsinanana
Manambara ny fotoana hanalefahana sy hanariana ny rano radioaktifa avy amin'ny orinasa Fukushima i Japana
11 Jona 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana